Tag: Galgalo | Sagal Radio Services
Al-Shabaab oo weerar culus ku qaaday saldhig Ciidamada Puntland ku leeyihiin Gobolka Bari
Dagaalyahano ka tirsan Al-Shabaab ayaa weerar culus ku qaaday saldhig Ciidamada Daraawiishta Puntland ku leeyihiin deegaanka Af-urur ee Gobolka Bari.
Diyaarado duqeymo ka geystay Buuraha Galgala ee Gobolka Bari
Sagal Radio Services • News Report • June 11, 2016
Wararka ka imaanaya Gobolka Bari ayaa sheegaya in diyaarado aan la aqoon dalka laga leeyahay ayaa duqeymo ka geystay Buuraha Galgala, halkaasoo la rumeysan yahay inay saldhig ku leeyihiin Dagaalyahano ka tirsan Al-Shabaab.
Wararka ka imaanaya Buuraha Galgala ee gobolka Bari ayaa sheegaya in askari ka tirsan ciidamada Puntland uu ku dhintay qarax miino.
Faah faahin ka soo baxaya dagaalo ka dhacay deegaano ka tirsan Buuraleyda Galgala
Sagal Radio Services • News Report • January 6, 2015
Dagaalo qaraar ayaa la soo sheegayaa in labadii maalmood ee la soo dhaafay ka dhacayeen deegaano ka tirsan Buuraleyda Galgala, halkaasoo ciidamada Puntland ay weerar ku qaadeen saldhigyo ay Al-Shabaab ku lahaayeen.
Saddex ka Tirsanaa Ciidamada Putland oo lagu dilay Qarax ka dhacay Galgala
Saddex askari oo ka tirsanaa ciidamada Puntland ee fadhigoodu yahay buuraleyda Golis ayaa la xaqiijiyey inay ku geeriyoodeen afar kalena dhaawac ayaa kasoo gaarey qarax duhurnimadii maanta ka dhacay meel u dhow tuulada Galgala.